IHE ỌRỤ IJI GBANYỤỌ NA WINDOWS 10 - WINDOWS - 2019
Ihe ọrụ iji gbanyụọ na Windows 10
Ajụjụ maka ịhapụ Windows 10 ọrụ na olu nke onye ị ga - enwe ike ịgbanwe ụdị mmalite ahụ na - enwekarị mmasị iji melite arụmọrụ usoro. N'agbanyeghị na nke a nwere ike ime ngwa ọrụ kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ, anaghị m akwado ọrụ na-agwụ ike na ndị ọrụ ndị na-enweghị ike idozi nsogbu ndị nwere ike ibute mgbe nke a gasịrị. N'ezie, anaghị m akwado ịhapụ Windows 10 usoro ọrụ.
N'okpuru ebe a bụ ndepụta nke ọrụ ndị nwere ike ịnwe nkwarụ na Windows 10, ozi gbasara otu esi eme nke a, yana nkọwa ụfọdụ maka ihe ọ bụla. Ana m edeghachi ya ọzọ: mee ya ma ọ bụrụ na ị maara ihe ị na-eme. Ọ bụrụ n'ụzọ dị otú a ịchọrọ iwepụ "ntughari" ndị dịlarịrị na usoro ahụ, mgbe ahụ, ọrụ ndị na-akụda mmụọ agaghị arụ ọrụ, ọ ka mma ịṅa ntị na ihe a kọwara na iji mee ngwa ngwa Windows 10, nakwa iji wụnye ndị ọkwọ ụgbọala ọrụ maka ngwaike gị.
Akụkụ abụọ mbụ nke akwụkwọ ntuziaka na-akọwa otú ị ga-esi jiri aka wepụ ọrụ Windows 10, ma nweekwa ndepụta nke ndị nwere nchebe iji gbanyụọ ihe n'ọtụtụ ọnọdụ. Akụkụ nke atọ bụ maka usoro nweere onwe ya nke nwere ike ịkwụsị ọrụ "enweghị isi" na-akpaghị aka, yana ịlaghachi ntọala niile na ụkpụrụ ndabara ha ma ọ bụrụ na ihe dị njọ. Ma na njedebe nke nkuzi vidiyo, nke na-egosi ihe niile a kọwara n'elu.
Otu esi ewepu ọrụ na Windows 10
Ka anyị malite na ọrụ ndị nwere nkwarụ. Enwere ike ime nke a n'ọtụtụ ụzọ, nke ndị a tụrụ aro bụ ịbanye "Ọrụ" site na ịpị Win + R na keyboard ma banye ọrụ.msc ma ọ bụ site na ihe nlekọta nchịkwa "Nchịkwa" - "Ọrụ" (ụzọ nke abụọ bụ ịbanye na Ọrụ taabụ na msconfig).
N'ihi ya, a na-eme windo na ndepụta nke ọrụ Windows 10, ọnọdụ ha na ụdị nkwalite. Site na pịa onye ọ bụla n'ime ha abụọ, ị nwere ike ịkwụsị ma ọ bụ malite ọrụ ahụ, yana ịgbanwe ụdị mwepụta.
Ụdị ụdị bụ: Akpaghị aka (na nhọrọ echekwara) - ịmalite ọrụ mgbe ịbanye n'ime Windows 10, na aka - ịmalite ọrụ ahụ n'oge OS chọrọ ma ọ bụ ihe ọ bụla ejirila - enweghị ike ịmalite ọrụ ahụ.
Tụkwasị na nke a, ị nwere ike iwepu ọrụ site na iji akara iwu (site na nchịkwa) site na iji nchịkọta sc config "ServiceName" mmalite = ndị nwere nkwarụ ebe "ServiceName" bụ aha njirimara nke Windows 10 gosiri na paragraf dị elu mgbe ị na-elele ozi na ọrụ ọ bụla pịa okpukpu abụọ).
Ọzọkwa, ana m arịba ama na ntọala ọrụ na emetụta ndị ọrụ niile nke Windows 10. Ntọala ntọala ndị a dị na ndekọ ụlọ ọrụ HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet - Ị nwere ike ịbupu mpaghara a site na iji nchịkọta akụkọ iji nwee ike iweghachite ụkpụrụ ndabara ngwa ngwa. Ọbụna ka mma, buru ụzọ mepụta Windows 10 mgbake, na nke ikpe ọ ga-eji na ọnọdụ nchekwa.
Na ihe ọzọ ederede: ị nwere ike ọ bụghị naanị gbanyụọ ụfọdụ ọrụ, ma hichaa ha site na iwepu Windows 10 components. Ị nwere ike ime nke a site na nchịkwa nchịkwa (ị nwere ike itinye ya site na nri-pịa mmalite) - mmemme na components - mee ma ọ bụ gbanyụọ Windows components .
Ọrụ ndị nwere ike ịkwụsị
N'okpuru ebe a bụ ndepụta nke ọrụ Windows 10 nke ị nwere ike iwepu ma ọ bụrụ na ọrụ ị na-enye anaghị eji gị. Ọzọkwa, maka ọrụ ọ bụla, enyekwara m ihe ndetu ndị ọzọ nwere ike inye aka ikpebi ma ọ ga-agbanyụ ọrụ.
NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service (maka kalịnda vidio NVidia ma ọ bụrụ na ịnweghị iji ihe eserese eserese 3D)
Net.Tcp ọrụ na-ekere òkè n'ọdụ ụgbọ mmiri
Ọrụ nzochi dichapụ BitLocker
Nkwado Bluetooth (ọ bụrụ na ị naghị eji Bluetooth)
Ọrụ ikikere ndị ahịa (ClipSVC, mgbe emechibidoro, ngwa ngwa Windows 10 anaghị arụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi)
Ọrụ Exchange Data (Hyper-V). Ọ bụ ihe ezi uche ịkwụsị ọrụ Hyper-V naanị ma ọ bụrụ na ị naghị eji igwe ọrụ Hyper-V.
Ọrụ Mmecha Nzuzo (Hyper-V)
Ọrụ Mgbapụta (Hyper-V)
Ọrụ Hyper-V Virtual Machine Session Service
Ọrụ mmekọrịta mmekọrịta Hyper-V
Ọrụ Exchange Data (Hyper-V)
Ọrụ Hyper-V na Desktọpụ na Desktọpụ
Ọrụ nlekọta sensọ
Ozi data ntanetị
Ọrụ maka ndị ọrụ jikọtara na telemetry (Nke a bụ otu n'ime ihe iji gbanyụọ snooping Windows 10)
Njikọ Njikọ Ịntanetị (ICS). Ọ bụrụ na ị gaghị eji njikwa ịkekọrịta Ịntanetị, dịka ọmụmaatụ, iji kesaa Wi-Fi na laptọọpụ.
Ọrụ Ntanetị Xbox Live
Superfetch (weere na ị na-eji SSD)
Onye nchịkọta Bipute (ma ọ bụrụ na ị naghị eji atụmatụ mbipụta, gụnyere mbipụta ka PDF na Windows 10)
Ọrụ Windows biometric
Ịbanye nbanye nke abụọ (ọ bụrụ na ị gaghị eji ya)
Ọ bụrụ na Bekee abụghị onye ọhụụ gị, mgbe ahụ, ikekwe ozi kachasị maka ọrụ Windows 10 na mbipụta dịgasị iche iche, ha nwere ike ịmepụta ihe ndị ha na-eme na ndagwurugwu dị na peeji nke. oji.
Mmemme iji gbanyụọ ọrụ Windows 10 Easy Service Optimizer
Ma ugbu a banyere usoro free iji bulie ntọala ntọala nke ọrụ Windows 10 - Mfe nkwụsị ọrụ dị mfe, nke na-enye gị ohere iji iwepughị ọrụ osụbeghị ọrụ OS na nchịkọta atọ nwere mmalite: Nchekwa, Ọdịmma na oke. Ịdọ aka ná ntị: Ana m ekwusi ike ka ịmepụta ebe ị ga-eweghachi tupu ịme ihe omume ahụ.
Enweghị m ike ịchọta, ma ikekwe iji usoro dị otú ahụ maka onye mbido ga-abụ nhọrọ nchekwa karịa ọrụ nkwarụ aka (ma ọ ka mma maka onye na-amalite ka ọ ghara imetụ ihe ọ bụla na ntọala ọrụ), n'ihi na ọ na-eme ka ịlaghachi na ntọala mbụ.
Mgbasaozi Ntanetị dị na Rọshịka na Russian (ma ọ bụrụ na ọ gbanyeghị na akpaghị aka, gaa Nhọrọ - Asụsụ) na ihe omume ahụ anaghị achọ nkwụnye. Mgbe ịmalite, ị ga-ahụ ndepụta nke ọrụ, ọnọdụ ha ugbu a na mmalite nhọrọ.
N'okpuru ebe a bụ bọtịnụ anọ na-enye gị ohere iji rụọ ọrụ ọrụ ndabara, nhọrọ nchekwa iji gbanyụọ ọrụ, ezigbo na oke. A na-egosipụta mgbanwe ozugbo na windo ahụ, na site na ịpị akara akaekpe aka ekpe (ma ọ bụ na-ahọpụta "Tinye" na menu Njikwa), a na-etinye ntọala ahụ.
Site na ịpị ugboro abụọ na ọrụ ọ bụla, ị nwere ike ịhụ aha ya, ụdị mpempe akwụkwọ na njedebe nchebe nke usoro ihe a ga-etinye na ya mgbe ị na-ahọpụta ntọala dị iche iche. Tinyere ihe ndị ọzọ, ịnwere ike ihichapụ ya (anaghị m enye ndụmọdụ) site na nhọrọ ndị dị na ya site na ịpị aka na ọrụ ọ bụla.
Enwere ike ibudata ngwa nfe kachasị na ntanetị n'efu site na ibe ọrụ. sordum.org/8637/easy-service-optimizer-v1-1/ (bọtịnụ nbudata dị na ala nke ibe).
Vidio banyere ọrụ nkwarụ Windows 10
N'ikpeazụ, dịka e kwere ná nkwa, vidiyo ahụ, nke gosipụtara n'ụzọ doro anya ihe a kọwara n'elu.